🥇 ▷ Amniga IPhone waa mid aad u xun in jabsiga Android uu hadda faaiido badan yeesho ✅
Amniga IPhone waa mid aad u xun in jabsiga Android uu hadda faaiido badan yeesho
The Amniga iPhone waa xun yahay. Si aad u badan oo xirfadlayaal u heellan ka faa’iideysiga jilicsanaanta iOS ayaa ah magdhow dheeraad ah si ay ugu noqdaan Android marka la eego tirada badan ee dhibaatooyinka laga helay nidaamka qalliinka Apple Taasi waxba ma aysan qaban laakiin soo jiidata haakarro badan oo aad u badan si ay u helaan “abaalmarinno.”
Tan ayaa la muujiyay Sofpedia, oo shaaca ka qaaday in tirada sii kordheysa ee ka-faa’iideysiga ay ogaadeen baarayaasha daafaha adduunka ay na xusuusinayaan mar labaad inuusan jirin taleefoon kaamil ah iyo in mantra uu had iyo jeer ilaaliyo taageerayaasha Apple in iPhone-ka uu ka amaan badan yahay taleefanka Android, uu joogsaday run noqo wakhti dheer.
Waa run sanadihii hore ah iPhone Waxaa loo tixgeliyey taleefan ku dhawaad ​​la aqbali karin. Tirada faa’iidooyinka loo adeegsado aaladda Apple Waxay ahayd mid aad u yar oo markasta oo nabaad-nimo ama fashilaad cusub la ogaado in laga faa’iideysan karo, shirkadda Mareykanku waxay isla markiiba soo saartay patch kaasoo kharibaya rajadii haakarisku.
Android… Ka aamin badan macruufka?
Warkani wuxuu yimid waxyar uun kadib markii Google ay ka digtay jabsiga ugu weyn ee taariikhda iPhone. Khubaro ka socota qaybta ayaa xaqiijinaya in magdhowgu yahay ka shaqeynta iPhone ka faa’iideysanaya Waxaa si weyn hoos loogu dhigay bilihii ugu dambeeyay, markii ugu horeysayna, waxaa la siiyaa wax ka yar kuwa loogu tala galay aaladaha Android. Sida laga soo xigtay shirkad u heellan suuqgeynta ka faa iidaysi labada macruufka iyo Android, “Duuliyaha ee iPhone hacks oo aan joogno maalmahan ayaa ka dhigaysa mid aad u faa’iido badan in laga shaqeeyo raadinta muuqaalka iyo nuglaanta Android ».
Weerarada Suuqa Laakiin Maalinta ayaa daadadku gashay kadib markii la ogaaday ciladaha kala duwan ee ka jira Safari iyo iMessage. Sidaas darteed, tiro badan oo baadhayaasha amniga ah ayaa dayacay shaqadooda Android waxayna bilaabeen inay diiradda saaraan shaqadooda iOS-ka waqti buuxa.
Xaqiiqdii, madaxa shirkadda Zerodium wuxuu sheegayaa in hadda Amniga iPhone waa mid aad u xun in ay jiraan dalal aad u tiro badan oo ka mid ah suuqgeynta qalabka taleefanka ama Apple Waxba kama qaban karaan marka laga reebo qaar iyaga ka mid ah.
Heerka tirada maanta, ilaa ka shaqeynta Android waa mid ka sii adag, shaqo looga faa’ideysto madal Google waxay leedahay qiimo dhan 2.5 milyan oo doollar, halka aadnuglaanta iPhone-ka ayaa ka hooseysa tirooyinkaan.